KULMIYE SIR WEYN BUU KA HAYAA IMAARAADKKU XAALADDA DAGAALKA SOKEEYE KU SOO FOOLLE SOMALIAND NA PROXY WAR BUU ISU ROGAYAA • Oodweynenews.com Oodweyne News
KULMIYE SIR WEYN BUU KA HAYAA IMAARAADKKU XAALADDA DAGAALKA SOKEEYE KU SOO FOOLLE SOMALIAND NA PROXY WAR BUU ISU ROGAYAA
KULMIYE horta marka hore waa in la fahmaa yuu yahay. KULMIYE maaha shacabka. Shacabka Somalidu meel kasta ha joogaan Somalia, somaliland, kililka shannaad dalka somalida ee loo bixiyey, Jabouti geddigood dadka waa qabaail adhi xaraysan oo kolba sida loo carraysiiyo iyo cawska loogu dhigo u birinbirqaynaaya iyagu maamul mayaqaaniin laakiin qof Bay yaqaaniin. Shacabka Somalidu waa kuwii qabaail badani Afweyne ka rumaystay reerka Isaaq la yidhaa badhna Carab baan u rarayaa badhna Ethiopia ahaan u rarayaa, dadkale ahaan dejininayaa. Arinkaasi Dawladdii Somali Republic sida ay u burburisay waataa aanay dib isagu iman karin. KULMIYE REGIME TII buu la shir yimi Siyaasad raqiisa oo reerraysan reer iyo sultanas ku sheeg ayaa dariiqa la taagan reer baan iska dhex rarayaa baan iska dhex rarayaa, talaw xaggay u rarayaan, waxaa a waxaa keenay Dawladda Imaaraadka xeebaha Somaliland iyo Puntland sicirka jaban ku iibsatay ee Sirta ka haysa Xukuumadda Somaliland. Ciidamada Suqadara la keenay waa kuwa difaacayaa Dekedahooda, Berbera iyo Bosaaso xagga Somaliland iyo Puntland na dhowaan Bay imanayaan. Toban jeer Bay ku celisay Somalia ayaanu kala saxeexanay Berbera, midnimada Somalia ayaanu raacsannay, Somaliland kama hadli karto oo sirtoodaa la hayaa, lacagta Dekedda iyo Saldhigga sida loo kala qaadanayaa bay haysaa. Markaa DAGAALKA CEEL-AFWEYN waa jiho wareerin laakiin dagaalku Burco Imikaba soo gaadho Somaliland way Burburtay.
RRU du waxay moodaysaa dagaalka CEEL-AFWEYN sidii guryihii dumarka iyo caruurta humidity ee loo dhacay xaaladda sidaa way ka duwantay, meeshu waa Sanaag geed lagu gabbado male, idhahaa kugu daalaya dhinaacaad eegtaba. Dagaalku markiiba qabaailka ayuu isu bedelayaa Ciidamadana waxba kama qarsoona nin walba reerkooduu raacyaa. Dagaalka hub iyo maal ka waxaa ka muhiimsan Morval ka iyo xaq ku dirirka, iyo strategy ga cid leh. Reeraha isdilidoona qaarbaa koob shaka ku jira oo dhinac walba lagaga iman ayaa. Xaaladda Civil War ka la yidhaa baa aad imika loogu dhawyey.
Dhinaca Immaaraadku raacsanyey Dhinaca kale Qatar baa raacsanaanaysa, KULMIYE dagaalkii bariga dhexe ayuu hungurigoodii ololayey Somaliland ku soo hogaamiyey, xaaladda dagaalka Carab dhexyaal ma damayo sida ka Ciraaq iyo Suriname, Yemen ayuu dalkeennii noqonayaa.